Trondro sy ravitoto - Nahandro malagasy Betsimisaraka
par Tatiana Razanadraibe	 8 janvier 2019 Écrire un commentaire
Ito indray ary ny sakafo androany : « Sakafo Betsimisaraka » izy ity. Trondro sy ravitoto afangaro, tena tsara be mintsy.
Ravitoto nototona niaraka tamin’ny tongolo gasy.
Voatabia, tongolo be, menaka, jumbo.
Trondro (mety daolo na poissonnerie na trondro gasy na ranomasina na ranomamy).
Fomba fiarakarana Trondro sy ravitoto
Doroina hafana tsara ny menaka aloha.
Arotsaka ao avy eo ny votabia sy tongolo dia atao masaka tsara ka arahina Jumbo.
Rehefa vita izay rehetra izay dia arotsaka amin’izay ny ravitoto.
Asina rano ilay izy avy eo fa tsy atao betsaka loatra fa atao izay mahasarona kely azy fotsiny.
Rehefa vita izay dia arotsaka avy hatrany ny sira ka saromana iny mba ho masa-maintso. Atao mandritra ny 15mn raha farany ela.
Rehefa hita fa masamasaka ny ravitoto dia alahatra tsara eo amboniny ny trondro ka somary alentika any anaty ravitoto mba hahazo tsiro tsara.
Tampohana rano kely eo amin’ny 1/2 vera lava eo dia endrasana ho ritra tsara ny ravitoto. Tsy asiana rano mintsy na dia kely aza.
Afaka atao be menaka mba hampafilotra azy bebe kokoa.
Nanolotra: Chenia La Rose
nahandro trondro, nahandro trondro gasy, ravitoto madagascar, ravitoto sy trondro, trondro malagasy
Article précédent : Hom Bao na Brioche chinois
Hôtel Anjary AntananarivoArticle suivant :